BYD SUV Don DM-p သည် $43,761 မှ ကြိုတင် ရောင်းချ မှု ကိုစတင် ခဲ့သည် – Pandaily
BYD SUV Don DM-p သည် $43,761 မှ ကြိုတင် ရောင်းချ မှု ကိုစတင် ခဲ့သည်
Jun 10, 2022, 12:49ညနေ 2022/06/10 14:09:26 Pandaily
ထိပ်တန်း တရုတ် ကား ထုတ်လုပ်သူ BYD ၏အ ထင် ကရ SUV ၊Don DM-p, Presale ကြာသပတေးနေ့ ည စတင်မော်ဒယ် သစ်ကို ဗားရှင်း သုံးမျိုး ဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။ ကြိုတင် ရောင်းချ မှု စျေးနှုန်း မှာယွမ် ၂ ၉၂, ၈၀၀ မှ ၃ ၃၂, ၈၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၃, ၇ ၆၁ မှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ ၉၇ ၄၀) ဖြစ်သည်။ ဗားရှင်း သုံးမျိုး သည် တူညီသော အကွာအဝေး နှင့် စွမ်းဆောင်ရည် ရှိပြီး configuration ကွဲပြား မှုရှိသည်။
ကား သစ် ဟာ BYD ရဲ့ Han DM-p မော်ဒယ် နဲ့ ဆင် တူတဲ့ ကုမ္ပဏီ ရဲ့ အသိအမှတ်ပြု နိုင်တဲ့ “ Dragon Face” ဒီဇိုင်း ဘာသာစကားကို အသုံးပြု ထားပါတယ်။ အဆိုပါ မော်တော်ယာဉ် ကြီးမားသော စားသုံးမှု ကင် အလှဆင် အကြေးခွံ ပါရှိသည်။ တရုတ် အက္ခရာ “ Tang” လို ဂို ကိုလည်း chrome-plated အလှဆင် ဘား သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ရှေ့ ပုံသဏ္ also ာန် ကိုလည်း ချိန်ညှိ ထားပြီး နှစ်ဖက်စလုံး တွင် လေ လမ်းညွှန် groove ၏အ ဖွင့် များသည် ပိုမို ကြီးမား ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် SUV ကား ၏တည်နေရာ ကိုမ ီး မောင်း ထိုး ပြသည်။
ဘေးထွက် သည် BYD Don EV အသစ် နှင့်အလွန် ဆင်တူ ပြီး လေ ဒဏ်ခံ နိုင်သည့် ဘီး များ တပ်ဆင်ထားသည်။ အမြီး သည် အနက်ရောင် full-frame LED taillight ကိုအသုံးပြု နေဆဲ ဖြစ်ပြီး tailmark ကို “ DM-P” ဖြင့်အစားထိုး လိုက်သည်။ “ 4.3s” ဟု ရေး ထားသော အိုင် ကွန် တစ်ခု ကိုထည့်သွင်း ခဲ့ပြီး ကား သည် တစ်နာရီ လျှင် သုည မှ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ အထိ အရှိန်မြှင့် ရန် ၄. ၃ စက္ကန့် သာ ကြာသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:BYD ဥက္က Chairman ္ဌ-စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် လုပ်ငန်း သစ် ၏အနာဂတ် သည် ထောက်လှမ်းရေး တွင်တည် ရှိသည်
အတွင်း ခန်း ပိုင်း မှာဆိုရင် Tang DM-p ဟာ မီးခိုးရောင် အရောင် နဲ့ Tang EV အသစ် ရဲ့ ဒီဇိုင်းကို ဆက်လက် ဖန်တီး ထားပါတယ်။ ၁၅. ၆ လက်မ Adaptive Rotary Suspension Central Console မှာ နောက်ဆုံးပေါ် DiLink 4.0 (5G) အသိဉာဏ် စနစ် တပ်ဆင် ထားပြီး အဆင့်မြှင့်တင် ထားတဲ့ DiPilot Intelligent Driving Assistance System, W-HUD (Head-up Display) နဲ့ အခြား configurations အသစ် တွေ တပ်ဆင် ထားပါတယ်။
Don DM-p မှာ 1.5Ti အင်ဂျင် နဲ့ EHS Electronic Power System တပ်ဆင် ထား မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင် ၏အမြင့်ဆုံး စွမ်းအား မှာ 102kW ဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံး torque မှာ 231Nm ဖြစ်သည်။ ရှေ့ နှင့်နောက် မော်တာ များ ၏အမြင့်ဆုံး စွမ်းအား မှာ 160kW နှင့် 200kW အသီးသီးဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီ သည် ဟိုက် ဘရစ် ကား များအတွက် lithium ferrous phosphate blade battery ကိုတပ်ဆင် ထားပြီး ၂ ၁၅ ကီလိုမီတာ အကွာအဝေး (NEDC) ရှိသည်။
ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပး ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ ၂ ၁၅ ကီလုိ မီတာ ေလး ဘီး ယြန္း Flagship ေမာ္ဒယ္ ကို ၃ ၃၂ ၈၀၀ ယြမ္ ၊ ၂ ၁၅ ကီလုိ မီတာ ေလး ဘီး ယြန္း ပရီမီယံ ေမာ္ဒယ္ ကို ၃ ၁၂ ၈၀၀ ယြမ္ ၊ ၂ ၁၅ ကီလုိ မီတာ ေလး ဘီး ယြန္း ပရီမီယံ ေမာ္ဒယ္ ကို ၂ ၉၂ ၈၀၀ ယြမ္ နဲ႔ Tang DM-i Super Hybrid ၂ ၅၂ ကီလုိ မီတာ ပရီမီယံ ေမာ္ဒယ္ ကို ၂ ၈၂ ၈၀၀ ယြမ္ နဲ႔ ေရာင္းခ် ခဲ့ပါတယ္။
တရုတ် ကား ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ BYD က သူ့ရဲ့ flagship SUV Don DM-p ရဲ့ ဓာတ်ပုံ တွေကို ဗုဒ္ဓဟူး နေ့မှာ ပြသ ခဲ့ပြီး ကား သစ် တွေအတွက် ကြိုတင် ရောင်းချ မှု မိတ်ဆက် ပွဲကို ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ် မယ်လို့ ကြေညာ ခဲ့ပါတယ်။
BYD သည်ယွမ် ၄ ၃၃ သန်း ဖြင့် ကုမ္ပဏီ ၏ရှယ်ယာ ၁. ၄၅ သန်း ကိုပြန်လည် ဝယ်ယူ ရန်စီစဉ် ထားသည်
တရုတ် ကား ထုတ်လုပ်သူ BYD က ဗဟို လေလံ များသို့မဟုတ် China Securities စည်းမျဉ်းဥပဒေ ကော်မရှင် မှအတည်ပြု သည့် အခြား နည်းလမ်းများဖြင့် သာမန် RMB ရှယ်ယာ များ (A ရှယ်ယာ များ) ကိုပြန်လည် ဝယ်ယူ ရန် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် ရန်ပုံငွေ များကိုအသုံးပြု ရန်စီစဉ် ထားကြောင်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ကြေငြာခဲ့သည်။